အယ်ဒီတာ့သင်ပုန်း – မတ်လ ၂၀၁၆ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Editor's Notes » အယ်ဒီတာ့သင်ပုန်း – မတ်လ ၂၀၁၆	15
Posted by kai on Feb 22, 2016 in Editor's Notes | 15 comments
လူသားဟူသည် မွေးဖွားလာသည်နှင့် ပညာကြိုးအကုန်အလိုလို တတ်ကျွမ်းနားလည်နေနိုင်ခြင်းမရှိ၊ လေ့လာဆန်းစစ်သင်ပေး/သင်ယူကြရသည်။ ရှေးအိန္ဒိယအခါကမူ မဟာဆရာတန်းဝင် ဗြဟ္မဏ တို့သည် လူ့ဘ၀ရေးရာကို နိမိတ်ဖတ်၊လမ်းညွှန်သည်။ ဝေဒ၊ ဗေဒင်တို့ဖြင့် မင်းနှင့်အုပ်ချုပ်သူများကို လွှမ်းမိုးချုပ်ကိုင်နိုင်သည်။ သို့နှင့်အမြတ်ဆုံးဇာတိနွယ်ဖြစ်ကာ ပူဇော်မှုအထူထူးကို ခံယူကြရပေသည်။
ခေတ်တို့ပြောင်းခဲ့သောအခါ လူသားတို့တွင် ပညာ/ဆရာစုံခဲ့သည်။ အတန်းပညာကိုစနစ်တကျသင်ကြားပေးသော မူကြိုမှသည် ကောလိပ်၊ တက္ကသိုလ်ကျောင်းကြီးများရှိလာသည်။ အားကစား၊ အနုပညာ၊ အသက်မွေးမှုအတတ်ပညာတို့အတွက် လိုင်စင်ပေးကျောင်းများ၊ သင်တန်းများရှိလာသည်။ ဆရာတို့ကို ထိုသင်တန်း၊ကျောင်း၊တက္ကသိုလ်များကတာဝန်ခံ၍ အခ၊လစာငွေကြေးပေးကာ ကျောင်းသားများအား သင်ကြားစေသည်။ သို့ဆိုသော် ယခုခေတ်ကာလတွင် ဆရာဆိုတိုင်း အနန္တောအနန္တ ခေါင်းစဉ်ကိုငှားတပ်၍ ဆပ်မကုန်ကျေးဇူးရှင်ကြီးများနေရာမရှိသင့်တော့ပေ။
အနန္တောအနန္တ ခေါင်းစဉ်သည် လူသားအချင်းချင်းအခွင့်တူညီမျှမှုကို ချေဖျက်လိုက်ကာ ဆရာတို့အား ပြန်လှန်မော်ကြည့် ထောက်ပြဆွေးနွေးမှုမပြုရဲ မပြုဝံ့သော တပည့်မျိုးဆက်များအားမွေးလာလိမ့်မည်။ အဆိုပါကျောင်းသားများသည် ကျောင်းတက္ကသိုလ်များက ထွက်လာကြသောအခါ နိုင်ငံရေး လူမှုရေးနယ်ပယ်အသီးသီးတွင် မာန်အပြည်နှင့် ခေါင်းမော့ဝင်ဆန့်ရန်ခက်ခဲသွားလိမ့်မည်။
ဆရာ၊တပည့်ဟူသည် ထိုက်သင့်သောလစာငွေကြေးယူကာ သင်ကြားရေးအလုပ်လုပ်နေသူနှင့် သင်ကြားနေသူ ကိုယ်စီအကျိုးစီးပွားအတွက် အလုပ်လုပ်နေသူများသာဖြစ်ရပေမည်။
ထိုအခြေခံတရားမှသည် မိမိအထက်အရာရှိသည်လည်းကောင်း၊ နိုင်ငံရေးသမားသည်လည်းကောင်း၊ ၀န်ကြီးသည်လည်းကောင်း၊ လွှတ်တော်အမတ်သည်၎င်း။ ယုတ်စွအဆုံး နိုင်ငံတော်သမ္မတသည်၎င်းကိုယ့်အလုပ်ကိုယ်လုပ်နေကြသည့် သူများအဖြစ်မြင်သာလာမည်။ ထိုမှ လူလူချင်းဆက်ဆံရေးတွင် မိမိကိုယ်တိုင်ယုံကြည်ချက်အပြည့်ဖြင့် ပြောဆိုဆက်ဆံရဲလာမည်ဖြစ်သည်။ အောင်မြင်ခြင်းတွင် ကိုယ့်ကိုယ့်ကိုယ်ယုံကြည်မှုရှိခြင်းသည်သာ အဓိကမဟုတ်လော။ လူမှုဆက်ဆံရေးတွင် တွန်းတင်ခြင်းလည်းမရှိ၊ ဆွဲချခြင်းလည်းမပြု ဖားခြင်းလည်းမမြည်၊ ကြပ်ပေးခြင်းလည်းမတည်သည့်ပုဂ္ဂလိကခံစားချက်မပါသည့် ဆက်ဆံရေးပြုရမည်။
မိဘများကို ဆုပ်ကိုင်နှိပ်နယ် ကိုယ်ထိလက်ရောက်ကူညီခြင်း၊ ငွေကြေးဥစ္စာဖြင့်ထောက်ပံ့ကျေးဇူးဆပ်ခြင်းထက် သဒ္ဓါ၊ သီလ၊ စာဂ၊ ပညာတရားများ တည်လာအောင်၊ စိတ်ဓါတ်ရေးရာအရ မှန်ကန်သောလမ်းသို့ရောက်အောင်တည့်မတ်ဆောင်ကျဉ်းပေးခြင်းသည်သာ ကောင်းမွန်မှန်ကန်သောကျေးဇူးဆပ်ခြင်းဖြစ်သည်ဟု ဗုဒ္ဓကမိန့်ခဲ့သည်။ (အင်္ဂတ္တရနိကာယ်၊ ဒုကနိပါတ်၊ သမစိတ္တ၀ဂ်၊ ) ထိုဗုဒ္ဓတရားကို ကျော်လွန်၍ အနန္တောအနန္တ ငါးပါးဝင်တို့အား ကျေးဇူးဆပ်၍မကုန်နိုင် ကျေးဇူးချေဖို့ ရန်မဖြစ်နိုင်ဟု အဓိပ္ပါယ်ထွက်သွားခြင်းသည် မသင့်လျှော်ပေ၊ ထိုမှသည် ဗုဒ္ဓကိုယ်တော်တိုင်ကိုပင် “မိခင်ကျေးဇူး နို့တလုံးဖိုးစာပင်မကျေ “ဟူသော အလွန်အကျွံဖွဲ့ဆိုမှုများတွင် မြန်မာတို့နစ်တော့သည်။
သားသမီးဟူသည် မိဘမှ မိခင်သဘာဝအလိုတော်အရ မွေးဖွားလာသော မျိုးဆက်သာလျှင်ဖြစ်သည်။ သားသမီးသည် “ကျွေးမွေးမပျက်
ဆောင်ရွက်စီမံ။ မွေခံထိုက်စေ။ လှူမျှဝေ၍။ စောင့်လေမျိုးနွယ် ၀တ်ငါးသွယ် ” တာဝန်ကျေလျှင် အိုကေပါမည်။
လူငယ်ဟူသည် အသက်၁၆မှ၂၀ နှစ်တွင် လွတ်လပ်သော လူသားတဦးအဖြစ်ရောက်သင့်လေပြီ။ မိဘ၏အုပ်ထိန်းမှုအောက်မှ တရားဝင်လွတ်မြောက်၍ မိမိအမှုကိုမိမိတာဝန်ခံကြရမည်။ အရက်ဝယ်နိုင်ပြီ၊ ကားမောင်းနိုင်ပြီ။ သီးခြားအိုးအိမ်ထူထောင်နိုင်ပြီ။ မဲပေးနိုင်ပြီ၊ ကိုယ်ကတခြားသူကိုပင်တာဝန်ယူ/တာဝန်ခံနိုင်သော လူကြီးဖြစ်ပေပြီ။ အမေရိကားတွင် အစိုးရအလုပ်၊ ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းဆောင်တာများ ဆောင်ရွက်ရာတွင် ဖြည့်ရသည့်စာရွက်စာတမ်းများ၌ မိဘအမည်ကိုမေးမြန်းခြင်းမရှိ၊ ဖြည့်ရန်မလိုပါချေ။
ထိုသို့ ရင့်ကျက်လွတ်လပ်သူအဖြစ်ရောက်သောနေ့(နှစ်)အားအထိမ်းအမှတ်ပွဲပြုကြသည့်နိုင်ငံများလည်းရှိသည်။ အထူးသဖြင့် ထိုဓလေ့အကျင့်ကို ပြုသည်များတွင် ကမ္ဘာအောင်မြင်နေသောနိုင်ငံကြီးများဖြစ်သည့် ဂျာမဏီ၊ စပိန်၊ ဂျပန် တို့လည်းပါသည်။ထိုဓလေ့အကျင့်ကို လောကီလူမှုရေးနယ်တွင် မြန်မာတို့ မွေးစားယူကာ အထိမ်းအမှတ်အခန်းအနား Coming of age တနေ့တရက်သတ်မှတ်လုပ်သင့်သည်။ ထိုရက်မှသည်သားသမီးပေါ်တည်းထားသော နှောင်ကြိုးတို့ကို တရားဝင် ဖြည်လွှတ်ပေးသင့်သည်။
ထိုသဘောအရကောက်ပါလျှင် ၂၀၀၈ မြန်မာ့အခြေခံဥပဒေအထိထည့်သွင်းလာသော မိဘနှင့်သားသမီးဆက်ဆံရေးနှင့် တာဝန်ခံတာဝန်ယူခြင်းဆက်သွယ်မှု၊ ထိုမှလွန်ကဲ၍ သားသမီး၏ ဇနီးခင်ပွန်းအထိနိုင်ငံသားဖြစ်တည်မှုကိုပင် ပတ်သက်စွက်ဖက်ထားသော ၂၀၀၈ အခြေခံဥပဒေ ၅၉(စ)အပိုဒ်ဟူသည် ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂမှ ထုတ်ပြန်ထားသော လူ့အခွင့်အရေးကြေငြာစာတန်းအပါအ၀င် (ဟိန္ဒူသာသနာမှလွဲသော) ကမ္ဘာ့ဘာသာသာသနာကြီးများ၏ အနှစ်သာရကို ချိုးဖောက်နေသည်မှာထင်ရှားပါ၏။
အိန္ဒိယ၏ ဟိန္ဒူသာသနာတွင် ဇတ်ခွဲစနစ်သည်လွန်ခဲ့သော နှစ်ထောင်ချီကထဲက အမြစ်တွယ်ခဲ့သည်။ လူတို့အား ပုဏ္ဏားမျိုး (ဗြဟ္မဏ)၊ မင်းမျိုး(ခတ္တိယ)၊ ကုန်သည်မျိုး(ဝေဿ)။ သုဒ္ဓ (ဆင်းရဲသားမျိုး) အဖြစ် မွေးရာပါအသားအရောင်မျိုးရိုးဇာတိအရ အမျိုးဇတ်ခွဲခြင်းရှိခဲ့ဖူးလေသည်။ နှစ်ထောင်ချီသမိုင်းအဆက်ဆက် ဂျိန်းမဟာဝီရ၊ ဗုဒ္ဓ၊ အစ္စလမ်သာသနာ၊ အင်္ဂလိပ်ကိုလိုနီ နှင့် အခြေခံဥပဒေထဲတွင်ပင်ထည့်သွင်း၍ ဇတ်စနစ်အား ချေဖျက်ရန်ကြိုးစားခဲ့သော်ငြား ပျောက်ကွယ်သွားခြင်းမရှိမူပဲ သူတို့၏ယဉ်ကျေးမှုထဲတွင် စူးနစ်နေပေသည်။
ဇတ်စနစ်အရ ဇတ်နိမ့်သူတို့သည် ဇတ်မြင့်သူတို့အပေါ် အခေါ်ဝေါ်၊အပြောအဆို ကိုယ်ဟန်အနေများကအစ ရိုကျိုးကိုးကွယ်ဆက်ဆံကြရသည်။ အခွင့်အရေးများဆုံးရှုံးခံကြရသည်။ ထိုခွဲခြားသော ဇတ်စနစ်ကြောင့်ပင် အိန္ဒိယသည် ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးဒီမိုကရေစီနိုင်ငံကြီးဖြစ်လင့်ကစား တိုးတက်သင့်သလောက်မတိုးတက်နိုင်ပဲ ဒရွတ်ဆွဲလျှက်ရှိသည်ကို တွေ့ကြရမည်။ ထိုယဉ်ကျေးမှုသည် အိမ်နီးချင်းမြန်မာ့မြေထဲသို့လည်း လွန်ခဲ့သောနှစ်ထောင်ချီကထဲကရောက်ရှိကာ ပုံစံတမျိုးဖြင့် အမြစ်တွယ်ခဲ့သည်မှာသေချာသည်။ အတွင်းအပြင် ၃၇မင်းနတ်စိမ်းများ၊ ဘိုးတော်၊ နတ်ကတော်တို့သည်ဇတ်ခွဲခြင်းမှလာသော ကျန်ရစ်သည့်ခြေရာများသာဖြစ်၏။
ဇတ်နိမ့်သူများက မြင့်သူများကို အလွန်အကျူး တွန်းတင်စင်တင်မှုဖြစ်ကာ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးကိုးကွယ်မှုတို့ရောက်ကုန်သည်ကိုလည်း မျက်မြင်တွေ့နေကြရပါမည်။
အမေရိကားတွင် ယခုတိုင်အောင် တွန်းထိုးလှုပ်ရှားနေရသေးသော လူဖြူ၊ လူမဲ၊လူနီ၊လူဝါ၊လူညို ခွဲခြားမှုများသည် အဆိုပါဇတ်ခွဲစနစ်၏ အခြားမျက်နှာသဏ္ဍန်သာ ဖြစ်ပေသည်။
ဗုဒ္ဓ၀ါဒအလိုအားဖြင့်လည်း ကံ-ကံ၏အကျိုးအားဖြင့် Cause and Effect မိမိကံ(အလုပ်)ကို မိမိသာတာဝန်ခံရပါသည်။ မိဘ ဆရာမှတာဝန်ယူတာဝန်ခံခြင်းမပြုနိုင်၊ ၀ဋ် တို့၏ သဘောသဘာဝဟုခေါ်ပါသည်။
ထေရ၀ါဒအလိုအားဖြင့်လည်း သံသရာတွင် မိဘ၊သားသမီး၊ဆရာ၊တပည့်တို့ဟူသည် သူက/ကိုယ်ကတလှည့်စီဖြစ်နိုင်သည်။ အကြိမ်ကြိမ်ဖြစ်နိုင်သည်။ အနန္တောအနန္တခေါင်းစဉ်ကြီးဖြင့် ဆပ်မကုန်ကျေးဇူးရှင်ကြီးများ မဟုတ်ကြပေ။
ခင်ပွန်းကြီး၁၀ပါး။ အနန္တောအနန္တငါးပါးထဲပါသော မိဘ၊ဆရာတို့အား ထိခိုက်ကြလော့။ မလေးမစားထားကြလော့ ဟူ၍ရန်ရည်ရွယ်တိုက်တွန်းခြင်းမဟုတ်။ အပြန်အလှန်လေးစားသမှုနှင့် ဆက်ဆံကြရမည်။
အရောင်တို့တွင် အဖြူမဟုတ်လျှင် အမဲမဖြစ်ပါ။ ကြားတွင်ရောင်စုံသက်တန့်ရှိပါ၏။
ဇတ်ခွဲစနစ်၏ သဏ္ဍန်သည် မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုတွင် အမြစ်တွယ်နေပါသည်။ တိုးတက်လိုလျှင် ပြင်ကြရမည်။ ပြင်ရဲရမည်။
အရှေ့တိုင်းနှင့် အနောက်တိုင်းကို ဒီမိုကရေစီနှင့်ညှိယူနေရာတွင် ဇတ်ခွဲဝါဒသည် ဂျမ်းတုံးကြီးဖြစ်လိမ့်မည်။
အိန္ဒိယပြည်တွင်လွန်ခဲ့သော ဆယ်စုနှစ် ၆ခုကထဲက ဇတ်စနစ်ကို အခြေခံဥပဒေထဲထည့်တားကာ ပြင်ကြသည်။ ယခုနှစ်ပိုင်းတွင် ဇတ်စနစ်ကြောင့်တွန်းတိုက်မှုသတင်းများ အိန္ဒိယတွင်ခပ်စိတ်စိတ်တွေ့လာရပြီ။ တော်လှန်ရေးနိမိတ်တို့ပြခဲ့ပါပြီ။
စိန့်ပြည်တွင် လွန်ခဲ့သော နှစ်၅၀က ယဉ်ကျေးမှုတော်လှန်ရေးလုပ်ကာ ရှေးရိုးစွန်းအယူတို့ကို ပြင်ခဲ့သည်။ မြန်မာပြည်ရုတ်ချည်းခေတ်ပြောင်းတိုးတက်လိုလျှင် တော်လှန်ရေးလိုပါသည်။
ဇတ်ခွဲစနစ်သည် အသားအရောင်လူမျိုးခွဲခြားနှိမ့်ချခြင်းသာဖြစ်သည်။ အမျိုး၊ ဘာသာ၊ သာသနာမတူဟူ၍ခွဲခြားခြင်းတို့ကို ဖြစ်
ပြင်လျှင် ကွန်ဆာဗေးတစ်၊ ရှေးရိုးစွဲတို့နှင့်တွေ့မည်မှာသေချာပါသည်။ သို့နှင့် အားပြိုင်မှုတခုဖြစ်လာစေရန်ရည်ရွယ်သည်။
လစ်ဘရယ်-ကွန်ဆာဗေးတစ်တို့ အားပြိုင်မှုမှ တွန်းထိုးလှုပ်ရှားရင် လက်ရှိအခြေအနေတို့နှင့်အကိုက်ညီဆုံးသော နေရာတခုတွင်တည်သွားပါမည်။
လူသားတိုင်းခွင့်တူညီမျှ ရှိကြပါစေ။ မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုတော်လှန်ရေး စနိုင်ပါစေသတည်း။
kai says: http://socgen.ucla.edu/2013/08/genetic-study-looks-for-clues-to-origin-of-indian-caste-system/
Source Paper:Genetic Evidence for Recent Population Mixture in India. Moorjani, Priya et al. American journal of human genetics doi:10.1016/j.ajhg.2013.07.006
Pop	Data Set	n	Language Family	Traditional Caste or Social Group	State/Territory	Latitude, Longitude	ANI%	Date of Mixture (gens)	Date of Mixture (years)
Madiga	Reich et al.1 and this study	13 (9)	Dravidian	lower caste	Andhra Pradesh	17°58′N, 79°35′E	32.0 ± 1.7	120 ± 21	3,480
Mala	Reich et al.1 and this study	13 (10)	Dravidian	lower caste	Andhra Pradesh	17°22′N, 78°29′E	34.3 ± 1.7	96 ± 16	2,784
Kallara	Metspalu et al.7	8	Dravidian	tribal	Tamil Nadu	10°99′N, 78°22′E	37.7 ± 1.8	113 ± 15	3,277
Vysya	Reich et al.1 and this study	14 (10)	Dravidian	middle caste	Andhra Pradesh	14°41′N, 77°39′E	37.9 ± 1.8	144 ± 27	4,176
Chamara	Metspalu et al.7	10	Indo-European	tribal	Uttar Pradesh	25°37′N, 83°04′E	38.7 ± 1.7	113 ± 13	3,277
Bhil	Reich et al.1 and this study	17 (10)	Indo-European	tribal	Gujarat	23°02′N, 72°40′E	38.9 ± 1.6	78 ± 7	2,262
Scheduled caste/tribea	Metspalu et al.7	6	Dravidian	lower caste	Tamil Nadu	21°46′N, 86°78′E	40.5 ± 1.9	83 ± 21	2,407
Dushadha	Metspalu et al.7	7	Indo-European	lower caste	Uttar Pradesh	25°44′N, 84°56′E	41.0 ± 1.8	107 ± 13	3,103
Velamaa	Metspalu et al.7	9	Dravidian	upper caste	Andhra Pradesh	17°05′N, 79°27′E	43.4 ± 1.7	85 ± 15	2,465
Dharkara	Metspalu et al.7	11	Indo-European	nomadic group	Uttar Pradesh	25°44′N, 83°1′E	47.8 ± 1.5	64 ± 11	1,856
Kanjara	Metspalu et al.7	8	Indo-European	nomadic group	Uttar Pradesh	26°45′N, 80°32′E	48.2 ± 1.7	75 ± 10	2,175
Kshatriyaa	Metspalu et al.7	7	Indo-European	upper caste	Uttar Pradesh	27°56′N, 78°65′E	54.6 ± 1.6	78 ± 9	2,262
Kshatriya	this study	15	Indo-European	upper caste	Uttar Pradesh	25°45′N, 82°41′E	60.9 ± 1.3	76 ± 10	2,204
Brahmina	Metspalu et al.7	8	Indo-European	upper caste	Uttar Pradesh	26°06′N, 83°18′E	61.2 ± 1.4	86 ± 7	2,494
Brahmin	this study	10	Indo-European	upper caste	Uttar Pradesh	25°45′N, 82°41′E	62.8 ± 1.4	65 ± 9	1,885
Sindhib	Li et al.20	10	Indo-European	urban groups	Pakistan	24°27′N, 68°70′E	64.3 ± 1.3	67 ± 8	1,943
Kashmiri Pandit	Reich et al.1 and this study	15 (10)	Indo-European	upper caste	Kashmir	34°22′N, 75°50′E	65.2 ± 1.3	103 ± 17	2,987
Pathanb	Li et al.20	15	Indo-European	urban groups	Pakistan	32°35′N, 69°72′E	70.4 ± 1.2	73 ± 9	2,117
သင့်အေးရိပ် says: တရား မျှတ… လွတ်လပ်ခြင်းနဲ့ မသွေ …
များလူ ခပ်သိမ်း ငြိမ်းချမ်းစေဖို့…
ခွင့်တူ ညီမျှ ဝါဒ ဖြူစင်တဲ့ပြေ…
တို့ပြေ…တို့မြေ…. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 3552
ဦးဦးပါလေရာ says: ၀ိုင်းမဆဲကြသေးတာထောက်တော့ ဒီဆိုက် လူသိပ်မရောက်ဘူးပဲ….
စကတည်းက မေတ္တာရှင်(ရွှေပြည်သာ) ရဲ့စကားကို ကုဒ် လုပ်ထားတယ်..
အဲ့ဘုန်းကြီးလူထွက်ကို ဘုန်းကြီးလူထွက်လို့ပါဆိုပြီး အကြည်ညိုပျက်နေကြတာ မသိဘူးထင်တယ်…
ရိုးရိုးသားသား ဘုန်းကြီးဝတ်ဘို့အကြောင်းလုံလောက်တဲ့အခါ ဘုန်းကြီးဖြစ်ပြီး လူထွက်ဖို့ အကြောင်းလုံလောက်တဲ့အခါ လူဖြစ်သွားတာကို အပြစ်တခုလို သဘောထားကြတာများတယ်..
ကျုပ်တော်တော်ကြိုက်တဲ့ တရားဟောဆရာ(နဲနဲလေး)ထဲမှာပါလို့ ကျုပ်ဖြင့် မခံချိမခံသာ ဖြစ်ရတယ်..။
သူဘုန်းကြီးလူထွက်လိုက်တဲ့အပေါ်မှာလဲ သူ့ရဲ့ ရိုးသားမှု့ ရဲရင့်မှု့ကို လေးစားသဘောကျတယ်။
လူဖြစ်သင့်ပြီ …. ဆိုတဲ့အခါ ပေတေပြီး ဘုန်းကြီးဆက်လုပ်မနေတာ ဘယ်လောက်သဘောကျစရာကောင်းသလဲ…
kai says: ဦးအံ့မောင်ရော.. ဦးဌေးလှိုင်ရော… ဘုန်းကြီးလူထွက်တွေပါ..
ပြတ်ပြတ်သားသား.. လူအဖြစ်ခံယူပြီး.. လောကီအလုပ်လုပ်တာကို ..ပိုကြိုက်တယ်..။
Tawwin Pan says: သီရိလင်္ကာတို့ ထိုင်းတို့မှာ ပညာသင်ပြီးမှ လူထွက်သွားကြတဲ့ဘုန်းဘုန်းတွေရှိပါ့။ အခုတောင် ဥူးဇင်းတစ်ပါးကလူထွက်မလို့ဆိုပြီး လာတိုင်ပင်နေလေရဲ့။ အရင်တုန်းကလည်း ထွက်ဖို့ ကြိုးစားပြီးပြီ။ မထွက်ဖြစ်ဘဲ အခုမှ ထပ်ကြိုးစားမယ်ဆိုပဲ။ ငယ်ဖြူဆိုတော့လည်း လူထွက်ချင်စိတ်ဖြစ်တတ်တာမဆန်းပါဘူး။ ဒီကလည်း မြှောက်ပေးထားတာ ဘုန်းကြီးအဖြစ်မနေချင်တော့ဘဲ လူဝတ်ကြောင်ဖြစ်ချင်ရင်လည်း ထွက်သာထွက်လို့။
ဦးဦးပါလေရာ says: အနန္တောအနန္တဂိုဏ်း ဆိုတာထဲက အနန္တောအနန္တ-ဆိုတာ
ဂုဏ်ရည်ဂုဏ်ပုဒ်တွေ ရေတွက်လို့မကုန်တာကို ဆိုလိုတာလား
ဗုဒ္ဓ၊ဓမ္မ၊သံဃာ ရတနာသုံးပါးကျေးဇူးက လူတိုင်းအပေါ်မရှိဘူး ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေအပေါ်သာရှိတာ
မိဘ ဆရာ ကျေးဇူးက လူတိုင်းအပေါ်ရှိတာ
ဒါကြောင့် ဘောင်ချင်းမတူလို့ တတွဲထဲဂိုဏ်းဖွဲ့တာ မဆီလျှော်ဘူး…
ဂုဏ်ရည်ဂုဏ်ပုဒ်တွေ ကြောင့် လို့ဆိုရင်
ဗုဒ္ဓ၊ဓမ္မ၊သံဃာ ရတနာသုံးပါး ဂုဏ်က မိဘနဲ့ ဆရာရဲ့ဂုဏ်ထက်
အလွန်အမင်းကွာခြားမြင့်မားလွန်းလို့ တတွဲထဲဂိုဏ်းဖွဲ့ဖို့ မဆီလျှော်ပြန်ဘူး..
ဓမ္မဆိုတာက ဘုရားရဲ့ အဆုံးအမ တစ်မျိုးထဲ
သံဃာဆိုတာက ဒီနေရာမှာ သံဃာထုတရပ်လုံးရဲ့ဂုဏ်ကို ခြုံပြီးဆိုတာ
မိဘ နဲ့ ဆရာ ဆိုတာကတော့
အမျိုးတကာမှ အမျိုးမျိုးကို စုံနေအောင်ရှိပါတယ်…
ကျုပ်တပြည့်ဟောင်းတွေရဲ့ အနန္တဂိုဏ်းဝင်အဖြစ်လဲ မခံယူနိုင်ကြောင်း..
ကျုပ်သားသမီးတွေရဲ့ အနန္တဂိုဏ်းဝင်အဖြစ်လဲ မခံယူနိုင်ကြောင်း…
naywoon ni says: ကျ​နော်​လည်း မန်းတက္ကသိုလ်​တုန်းက မြန်​မာစာ ကထိက တစ်​​ယောက်​​ပြောခဲ့ဖူးတာ သတိရပြီး ပို့စ်​တင်​မလို့ဟာ မ​အောင်​မြင်​​သေးဘူးဘဲ အဓိက က​တော့ ဘာသာ​ရေးနဲ့ လူမှု​ရေး ကွဲပြား​အောင်​ မကြည့်​တတ်​မမြင်​တတ်​တဲ့ြ​ဗဟ္မာဏ ဝါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာ​တွေရဲ့ အယူအဆ​တွေ လွှမ်းမိုးခံ​နေရတာပဲ ။ ဗုဒ္ဓဘာသာ မြန်​မာပြည်​ မ​ရောက်​ခဲ့ရင်​ ဒါမှမဟုတ်​ ဗြဟ္မဏ အယူဝါဒ ထွန်းကားရာ နဲ့ ​ဝေး​ဝေးလံလံမှာ မြန်​မာပြည်​ရှိခဲ့ရင်​ ဒီပြဿ နာ​တွေ ရှိချင်​မှရှိလိမ့်​မယ်​လို့ ​တွေးမိ ။။
uncle gyi says:ြ​ဗဟ္မာဏ၀ါဒစတင်ထွန်းကားရာအနောက်အရပ်မှာတောင်ကိုးကွယ်ယုံကြည်မှုတွေ
naywoon ni says: ကျုပ်​ဘဂျီး ​ကြေးစည်​ ထုလိုက်​မယ်​ မထင်​ ပိုပို ဆိုးလာတာမျက်​မြင်​
ခင်ဇော် says: ကို မျိုးဟန်ထွန်း ဝေါ ပေါ်က မ လာတာ။
ဘာသာမဲ့ အများဆုံးနေထိုင်သောနိုင်ငံများ – (ဒါဖတ်ပြီး သေချာ စဉ်းစားပါ)
၁။ ဆွီဒင် ( ၈၅ % ) ဘာသာမဲ့
ကမ္ဘာပေါ်ရှိဆင်းရဲသောနိုင်ငံများကို ကူညီလျှုဒါန်းရာတွင် ကမ္ဘာ့နံပါတ်တစ် အများဆုံးဖြစ်သောနိုင်ငံ၊ IT နည်းပညာ ထိပ်တန်းနိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်သည်။
၂။ ဒိန်းမတ် ( ၈၀ % ) ဘာသာမဲ့
စိတ်ချမ်းသာပျော်ရွှင်ဖွယ် အကောင်းဆုံးနိုင်ငံအဖြစ်အသိမှတ်ပြုခံထားရပြီး ဆွီဒင်ကဲ့သို. ဆင်းရဲသောနိုင်ငံများအား လျှုဒါန်းမှုမြင့်မားသောနိုင်ငံဖြစ်သည်။
၃။ နော်ဝေ ( ၇၂ % ) ဘာသာမဲ့
UNDP မှ နေထိုင်ရန်အသင့်တော်ဆုံးအဖြစ် သတ်မှတ်ထားခြင်းခံရသောနိုင်ငံ ဒုက္ခသည်များကိုကူညီစောင့်ရှောက်ပေးသောနိုင်ငံ၊ လူအခွင့်အရေးအလွန်မြင့်မားသောနိုင်ငံဖြစ်သည်။
၄။ ဖင်လန် ( ၇၀ % ) ဘာသာမဲ့
အေးချမ်းစွာနေထိုင်တတ်သော လူအများစုနေထိုင်ပြီးနှစ်စဉ်အနောက်နိုင်ငံများတွင် သချာင်္ရမှတ်အားနှင့် စာဖတ်စွမ်းရည်ရမှတ်အား အများဆုံးနိုင်ငံအဖြစ်သတ်မှတ်ခံထားရသည်။
၅။ ဂျပန် ( ၆၅ % ) ဘာသာမဲ့
စီးပွားရေးအင်အားတောင့်တင်းသောနိုင်ငံ၊ အာရှရှိဆင်းရဲသောနိုင်ငံများတွင် စာသင်ကျောင်းနှင့် အခြားအကူအညီများပေးသောနိုင်ငံ၊ လူတစ်ဦးခြင်း ကိုယ်ပိုင်အသိစိတ်ဖြင့် စည်းကမ်းရှိသောနိုင်ငံ၊ နည်းပညာအဆင့်မြင့်သောနိုင်ငံဖြစ်သည်။
၆။ တောင်ကိုးရီးယား ( ၅၂ % ) ဘာသာမဲ့
GDP နှစ်စဉ်မြင့်တက်နေသောနိုင်ငံ စည်းကမ်းကောင်းသောနိုင်ငံ၊ ဂျပန်ကဲ့သို့နည်းပညာကောင်းသောနိုင်ငံ၊ ၎င်းတို့၏ ဖက်ရှင်နှင့်ရုပ်သံဇတ်လမ်းများကို ပြည်ပနိုင်ငံများကို လွှမ်မိုးအောင်စွမ်းဆောင်နိုင်သောနိုင်ငံဖြစ်သည်။
( မှတ်ချက် )
ဆင်းရဲ၍၊ တီထွင်ဖန်တီးမှုဥာဏ်စွမ်းမရှိသော၊ ပဋိပက္ခများပေါများသော၊ စစ်ပွဲများအတောမသတ်သောနိုင်ငံများ အတတ်ပညာနည်းပါး၍၊ လူ.အခွင့်အရေးအားနည်းသောနိုင်ငံများကိုကြည့်လျှင် ဘာသာတရားအလွန်ကိုင်းရှိုင်းသောနိုင်ငံများဖြစ်နေသည်ကိုတွေ.ရပေမည်။
ဥပမာ – ဆိုမားလီယားသည် ( ၉၉.၉ % ) ဘာသာတရားကိုင်းရှိုင်းသူများနေထိုင်ပြီး ပဋိပက္ခအဖြစ်များဆုံး၊ တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုမရှိဆုံးနိင်ငံဖြစ်သောကြောင့် UNDP မှ ကမ္ဘာပေါ်တွင်နေထိုင်ရန် မသင့်ဆုံးနိုင်ငံအဖြစ်သတ်မှတ်ထားပါသည်။
စာရေးသူ မှတ်ချက်။ ဘာသာမဲ့နိုင်ငံများမှ ဘာသာရေး ထွန်းကားသော နိုင်ငံများကို ပြန်လည် လှုဒါန်းရသောအဖြစ်တွင် ဘာသာရေး ထွန်းကားသော နိုင်ငံများက အလှူခံခြင်းသာလျှင် အလွန်အကြီးမားဆုံး တီထွင်မှု အဖြစ်သာ ကျန်ရှိနေတော့သည်။ မည်သို့ မည်ပုံ အလှူ ခံရမည်ဆိုတာကိုက သူတို့၏ တီထွင်မှု ပင်ဖြစ်သည်။
ဘာသာမဲ့ နိုင်ငံများတွင် မေတ္တာတရားထွန်းကား၍ လူသတ်သော အပြစ်ရှိသူပင် ကြိုးစင်တင် သတ်ဖြတ်ခြင်း မလုပ်တော့ပေ။ ဘာသာရေး ထွန်းကားသော နိုင်ငံများသည်ကား ဘာသာရေး စာအုပ်တအုပ်အတွက်ပင်လျှင် သေဒါဏ် အဖြစ် ခေါင်းဖြတ်သတ်ကြသော မဟာဂရုဏာရှင်များ အဖြစ် ရပ်တည်ကြသည်။ သည်းခံခြင်း – Peace ငြိမ်းခြမ်းခြင်း စသည်တို့ကို Special နှုတ်မှ ထပ်တလဲလဲ ပြောဆိုသောလည်း ဘယ်သူမှ သည်းမခံ။
ဘာသာမဲ့ နိုင်ငံများ အိပ်စား ကာမ လျှော့၍ တီထွင်ကြံစချိန် ပိုပေးနေချိန်တွင် .. ဘာသာရေးထွန်းကားသော နိုင်ငံများသည် အိပ်စားကာမဖြင့် ဘာသာမဲ့နိုင်ငံများမှ တီထွင်ကြံစသော ပစ္စည်းများအား မှိန်ရည် ရှက်ရည် အသုံးပြုကြသည်။
ဘာသာမဲ့နိုင်ငံများတွင် သိပ္ပံဖြင့်တိုင်းမရ မလိုလားအပ်သော အကြောင်းတရားများကို ငြင်းဖို့ စိတ်ကူးတွင် မရှိချိန်တွင် .. ဘာသာရေးထွန်းကားသော နိုင်ငံများတွင် သိပ္ပံဖြင့်တိုင်းမရ မလိုလားအပ်သော အကြောင်းတရားကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော ပြသနာများကို မီးသေစေရန် ဘာသာပေါင်းစုံ ချစ်ကြည်ရေး ဆိုပြီး ပွဲများကို ထပ်တလဲလဲ အချိန်ကုန်ခံ ကျင်းပပေးရသည်။
ဘာသာမဲ့နိုင်ငံများတွင် လူသားတို့ကို အကျိုးပြုမည့် ဆေးဝါးရှာဖွေရေးအတွက် ငွေပုံအော အသုံးပြုချိန် ဘာသာရေးထွန်းကားသော နိုင်ငံများသည် မလိုလားအပ်သော သဲထဲရေသွန် ပင်လယ်ထဲမိုးရွာ သကဲ့သို့ ငွေများစွာကို ဖြုန်းတီးကြသည်။ ဘာသာမဲ့နိုင်ငံများမှ ဆေးပညာရေးမှ တီထွင်ရရှိလာသော ဆေးဝါးများကို သူတို့ ယုံကြည်ရာ ရေမာန်း ဆိုသည့် ရေဖြင့် ရောဂါပျောက်သည်ဟု သောက်သုံးကြသည်။
ဘာသာရေးထွန်းကားသော နိုင်ငံများတွင် အခြားသူသည် ဘာလူမျိုးမို့ ဘာဘာသာဝင်မို့ ဆိုပြီး ခွဲခြားဆက်ဆံ ဒုက္ခပေး – ဘာသာမတူ အယူမတူ၍ သတ်ဖြတ်နေချိန် ဘာသာမဲ့ နိုင်ငံများသည် မည်သူမည်ဝါမခွဲခြားပဲ ဆက်ဆံသည်။ ထူးဆန်းပေစွ တချို့ဘာသာမဲ့ နိုင်ငံများသည် နိုင်ငံသားအဖြစ်တောင် အသနားခံပါက ပေးသနားတော်မူသည်။ လုံခြုံမှု အလုပ်လုပ်ကိုင်ခွင့် ဆေးဝါးကုသခွင့် ပညာရေး အဆုံး အစအစအရာရာ ထောက်ပံ့ပေးသည်။
kai says: “Religion is the opium of the people” – Karl Marx
ယမကာကျော်စွာ အူးမြောက်မြောက် (B.E) says: ဘူ့မှ မကိုးကွယ်ပဲနေရင် တခုခု လိုနေသလို ခံစားရလို့
အရင်ကကျော်စွာဦးကြီးမိုက် says: .တိုတိုနဲ့လိုရင်းပြောရရင် ဦးပါအယူအဆနဲ့မိမိထပ်တူကျပါောကာင်း Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 14462
kai says: ကျနော်ကို လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်လိုဘဲ ဆက်ဆံပါ’ဟု ခေါင်းညွှတ်နှုတ်ဆက်သော အား/ကာ အရာရှိများကို ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေး ပြော
၄-၄-၂၀၁၆ ရက် ၁၄း၀၀ နာရီအချိန် နေပြည်တော်အားကစားနှင့် ကာယပညာဦးစီးဌာနရုံးတွင် ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေးနှင့် အားကစားနှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်အပါအ၀င် ညွှန်ကြားရေးမှူးအဆင့် ဌာနအကြီးအကဲများနှင့် မိတ်ဆက်တွေ့ဆုံပွဲတွင် ဌာနဆိုင်ရာအရာရှိများက ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးအား ဦးခေါင်းညွတ်၍ အမည်၊ ရာထူး၊ တာဝန်မိတ်ဆက်မှုတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာမြင့်ထွေးက “ကျွန်တော်ကို လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်လို သဘောထားပြီး ဆက်ဆံပါ။ ဂါရ၀ပြုဦးညွှတ်နှုတ်ဆက်ခြင်း မပြုပါနဲ့”ဟု ပြောဆိုခဲ့သည်။
တွေ့ဆုံမှုတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာမြင့်ထွေးက “ဌာနအသစ်တခုကို စတင်ကိုင်တွယ်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက် ဘာလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ စတင်ပြီးတော့ မပြောချင်ပါဘူး။ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်မြဲ လုပ်ဆောင်ချက်တွေထဲက ဘာတွေကို ဦးစားပေးလုပ်ဆောင်ပေးသင့်တယ်ဆိုတာကို တင်ပြပေးပါ။ ညှိနှိုင်းမှုနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမှာပါ”ဟု ပြောသည်။
“အားကစားနဲ့ကျန်းမာရေးဆိုတာ ယှဉ်တွဲနေတာဖြစ်ဖို့လိုတယ်။ ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းလုပ်ဆောင်သင့်တယ်ဆိုတာကို လုပ်နေကြသူတွေက သိပြီးဖြစ်ပါမယ်။ ကိုယ့်ကားကို ကိုယ်တိုင်မောင်းနေရာက တခြားလူတယောက် ၀င်မောင်းရင် လောလောဆယ်အဆင်မပြေသလိုပေါ့ဗျာ။ တခုပြောချင်တာက အားကစားလိုက်စားခြင်းသည် ကျန်းမာရေးကို အထောက်အကူဖြစ်စေတာမို့ အခြေခံကျောင်းတွေကစပြီး အားကစား လေ့လာလိုက်စားမှုရှိလာအောင် ဘယ်လိုဆောင်ရွက်ပေးသင့်တယ်ဆိုတာကို စဉ်းစားပြီး အကောင်အထည်ဖော်ပေးပါ။ မနေ့တုန်းက ပြောခဲ့သလိုပေါ့။ ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာနဆိုပြီး ဖြစ်ကောင်းဖြစ်လာမှာပါလို့ ပြောချင်ပါတယ်” ၎င်းကပြောသည်။
“တခုပြောချင်တာကတော့ အားကစားနဲ့ပတ်သက်ပြီး လှုပ်ရှားမှုတွေကို တခါလာလည်း ရန်ကုန်၊ တခါလာလည်း မန္တလေးဆိုတာမျိုး မဖြစ်စေဘဲ အပြင်ကနေ အတွင်းကို စုသွားတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ဖြစ်အောင် အကောင်အထည်ဆောင်ရွက်ပေးဖို့ကိုတော့ အကြံပေးချင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ မကြာခဏ ဆုံပါမယ်။ အကြံပြုတင်ပြပါ”ဟု နိဂုံးချုပ်ပြောကြားခဲ့သည်။ တွေ့ဆုံပွဲသို့ အားကစားနှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာနမှ ညွှန်ကြားရေးမှူးအပါအ၀င်ဌာနဆိုင်ရာ အရာရှိ (၆၀) ဦးခန့် တက်ရောက်ခဲ့သည်။
kai says: သတင်း
“အဘ” မခေါ်နဲ့ လုို့ မန္တလေးတုိုင်း ၀န်ကြီးချုပ် သတိပေး
မြတ်ပြည့်ဖြိုး| March 31, 2016 | Hits:33,849
မန္တလေးတုိုင်းဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်က ၀န်ထမ်းများအနေဖြင့် ၎င်းကုို “အဘ”ဟု မခေါ်ကြရန် သတိပေး လုိုက်ပြီး ခရီးဦးကြိုပြုခြင်း၊ မတ်တပ်ရပ်၍ အရုိုိအသေပေးခြင်းများ မပြုလုပ်ကြရန် သတိပေး ပြောဆိုလိုက်သည်။
မန္တလေးတုိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်က အစုိုးရအဖွဲ့ရုံးများ လိုက်လံစစ်ဆေးစဉ် ၀န်ထမ်းများက “အဘ” ဟု ခေါ်ဆိုသည့် အပေါ် သတိပေးပြောဆိုလုိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။
ယနေ့ မန္တလေးတုိုင်းလွှတ်တော်တွင် ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်သည် မန္တလေးတုိုင်းဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ် ကျမ်းသစ္စာ ကျိန်ဆုိုပြီးနောက် ၀န်ကြီးချုပ်တာဝန်ထမ်းများ စတင်ထမ်းဆောင်ပြီး လွှတ်တော်သုို့ ပထမဆုံးအကြိမ် မိန့်ခွန်း ပြောကြားခဲ့သည်။
မန္တလေးတုိုင်းလွှတ်တော်တွင် ပြောကြားသော မိန့်ခွန်းတွင် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာ ဇော်မြင့်မောင်က ပုဂ္ဂိုလ်စွဲ၊ ၀ါဒစွဲမထားဘဲ မဏ္ဍိုင်သုံးရပ် အပြန် အလှန် ထိန်းကျောင်း ဆောင်ရွက် သွားကြရန် ယနေ့ကျင်းပသည့် တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်တွင် တိုက်တွန်း ပြောကြားသည်။
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်၏ ပထမဆုံးအကြိမ် မိန့်ခွန်းတွင် အုပ်ချုပ်ရေး၊ ဥပဒေပြုရေး၊ တရားစီရင်ရေး မဏ္ဍိုင်သုံးရပ်က အပြန်အလှန်ထိန်းကျောင်းကာ ပြည်သူ့အကျိုးကို ဆောင်ရွက်ပေးသွားရမည် ဆိုသည့်အချက် အား အလေးအနက်ထားပြောကြားသွားသည်။
၀န်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်က “မဏ္ဍိုင်သုံးရပ်က အာဏကို ခွဲဝေသုံးစွဲသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်၊ ကျနော်တို့
အုပ်ချုပ်ရေးမဏ္ဍိုင်ကိုလည်း လွှတ်တော်က ထိန်းမတ် စောင့်ကြပ်ပေးဖို့ တောင်းဆိုပါတယ်၊ ဒီအတွက် ကျေကျေနပ်နပ်ကြီးတာဝန်ယူမှာ ဖြစ်ပါတယ်” ဟု ထည့်သွင်းပြောကြား ခဲ့သည်။
ဒုတိယအကြိမ် တိုင်းလွှတ်တော် ပထမပုံမှန်အစည်းအဝေးကာလအတွင်း လွှတ်တော်ရေးရာကေ်ာမတီ ၁၄ ခုဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်အနေဖြင့် ယခင်အစိုးရလက်ထက်က ခွင့်ပြုခဲ့သည့် စီမံကိန်းများနှင့် ပတ်သက် ပြီး ပြန်လည်လေ့လာသုံးသပ်သွားမည်ဖြစ်ရာ တိုင်းအတွက် နစ်နာစေမည့်စီမံကိန်းများ ရှိနေပါက လိုအပ်ချက် များကို ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်သွားရန် အစီအစဉ်ရှိသည်ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။
“အစိုးရပ်တရပ်ရဲ့ တာဝန်က အရင်ကဟာကိုလွဲယူရတာ၊ စာချုပ်ချုပ်ပြီးသွားရင် နောက်အစိုးရက လက်သင့်ခံ ရ တာ ဒါဥပဒေပဲ၊ အဲဒါတော့ ဘာမှလုပ်လို့မရပေမယ့် Term & Condition တွေကိုတော့ ပြင်လို့ရတယ်၊ ဒီစီမံကိန်း တွေက ပြည်သူ့ကို တကယ်ပဲ အကျိုးရှိလားမရှိလားဆိုတာ ကျနော်တို့ ပထမဆုံးလေ့လာ ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်၊ ခုတော့ဒီလောက်ပဲ ပြောနိုင်ပါသေးတယ်” ဟု ပြောသည်။
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး မပြီးပြတ်သေးသည့် စီမံကိန်းများ၊ ဒေသခံများအတွက် အကျိုး မရှိနိုင်သည့် စီမံကိန်းများ နှင့် စပ်လျဉ်းပြီး သက်ဆိုင်ရာ ပညာရှင်များနှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးကာ လိုအပ်ချက်များအား ပြန်လည် ပြင်ဆင် ညှိနှိုင်း သွားမည်ဟု ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်က ဆုိုသည်။